भोलि मङ्गलबार देखि लागू हुने गरि ह्वात्तै घट्यो ग्यासको मुल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो ! – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठअर्थभोलि मङ्गलबार देखि लागू हुने गरि ह्वात्तै घट्यो ग्यासको मुल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो !
भोलि मङ्गलबार देखि लागू हुने गरि ह्वात्तै घट्यो ग्यासको मुल्य, हेर्नुहोस कति पुग्यो !
काठमाडौं। लामो समयपछि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य घटेको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार राति १२ बजेदखि लागू हुनेगरी प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ घटाएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार निगमले ग्यासको मूल्य घटाएको हो। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******